.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Phtoshine v3.3 Portable
ပုံလေးတွေကို ဒီဇိုင်းမျိုးစုံနဲ့ လှလှပပလေးတွေ ဖြစ်အောင် အလွယ်တစ်ကူ လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက
အရမ်းကောင်းပါတယ်။ Template ဒီဇိုင်း ပေါင်း 237 ခု ပါရှိပြီး File Size : 30 MB ရှိပါတယ်။ Version 3.3 ဖြစ်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတို့ သုံးလို့ အလွယ်ကူဆုံး ဖြစ်အောင် ကျွန်တော် Software ကို Portable လေး လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဒေါင်းပြီးတာနဲ့ ဖွင့်သုံးရုံပါပဲ။ လိုချင်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ..။
Download: Phtoshine v3.3 Portable
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကို ကြိုက်နှစ်သက်လို့ တစ်ခြားဆိုဒ်တွေမှာ ပြန်တင်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့် Blog ကို Credit ပြန်ပေးပါ။
Full Version ဖြစ်အောင်နဲ့ Portable ဆော့ဝဲလ်လေး အဖြစ် ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် အပင်ပန်းခံပြီး လုပ်ပေးထားတာပါ။
လာရောက် အားပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်း မောင်နှမများ အားလုံးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း.. Thurainlin
Posted by Thurainlin at 10:17
Labels: Photo, Phtoshine, Software